Mawaqashelwe amampunge ngeCovid 19 - Ilanga News
Home Izindaba Mawaqashelwe amampunge ngeCovid 19
Mawaqashelwe amampunge ngeCovid 19
Ongoti bagcizelela elokuthi kalikho ikhambi okwamanje
Ongoti bacacisa ukuthi abantu (ikakhulukazi izaguga) mabangaluthwa ngamaqola afuna ukuzenzela imali esheshayo bagcine bethenga imikhiqizo engeyona ngoba bethi yelapha iCovid-19.
UKUPHELELWA wunembeza kwabantu balesi sizukulwane sekwandisa uhlobo lwabantu abadlala ngegeja kuziliwe kangangoba nakulesi sikhathi sokuhlasela kwegciwane iCovid-19, kunabathile ababona ithuba lokuzi-cebisa ngalesi simo ngokufafaza ama-mpunge ngokungaselapha.
Umuntu osuke ebhekene nenkinga enjengokuhlaselwa yileli gciwane nomake yisiphi isifo, ikakhulukazi osekhulile, ubuthaka bakhe bumenza alukholwe kalula lolu lwazi olungamampunge olujikeleza ezinkundleni zokuxhumana kulezi zinsuku.
Lokhu sekuze kwenza imibhalo ehloniphekile yezokwelapha, kuyona okubalwa i-Health24 neminye, bakhiphe isexwayiso ngolwazi oludukisayo olusezinkundleni zokuxhumana lapho abantu abahluphekile beyalelwa ukuba bathenge imikhiqizo engamawuwa okuthiwa iyasiza kulesi simo segciwane.
Ingwadla kule ndaba wumbuzo othi ukwazi kanjani ukuhlukanisa phakathi kweqiniso namampunge ngobuqili obumayelana negciwane iCovid-19?
IMIBUZO NOKUYE OKUVAMISE UKUSHIWO
∗ Kungabe isakhamzimba i-zinc siyashesha ukunqamula igciwane? Kungabe isengezo (supplement) sikaVitamin C siyayivimba i-Covid-19?
Impendulo kuyona yomibili le mibuzo ithi kalikabi khona iphilisi kumbe ikhambi lokuvimbela noma lokwelapha leli gciwane okwamanje.
Ungoti wezamagciwane uRebecca Dutch we-University of Kentucky, eLexington, e-United States of America (USA) uthi: “Siyaye sicabange ukuthi kunendlela esheshayo yokuqeda le nto. Kodwa ka-kukho mkhiqizo ongakuvikela ukuba leli gciwane lingakuhlaseli.”
UHLELO LOKUSEBENZA KWAMASOSHA OMZIMBA LUJULILE
Usolwazi wezengqondo osewathatha umhlalaphansi uDkt Stephen Barrett, onenkundla yokuxhumana iQuackwatch ewachithayo amampunge azenza sengathi awulwazi lwesayensi, uthi lolu bhubhane selunohide lwemikhiqizo abathi iqinisa amasosha omzimba kanti uhlelo lokusebenza kwamasosha omzimba lujule kakhulu, kakulula ukuluqonda kangangoba kayikho indlela yezesayensi ebizwa ngokuthi: “Wukuqinisa uhlelo lokusebenza kwamasosha omzimba,” esho.
Naye uvumelana noRebecca Dutch ekuthini kawukabi khona umkhiqizo ovimbela noma owelapha iCovid-19.
Empeleni leli phuzu lenanelwe ngisho nayilabo abenza imikhiqizo yezengezo (supplements). Umkhandlu wezokudla iCouncil for Responsible Nutrition nososesheni wemikhiqizo engamakhambi e-USA obizwa nge-American Herbal Products Association, usanda kuyalela izitolo ezithengisa imikhiqizo yokwengeza izakhamzimba ukuba zenqabe ukufaka emashalofini azo (okuthengisa) imikhiqizo okuthiwa ikwazi ukwelapha noma ukuvimbela iCovid-19.
“Kasinalwazi ngocwaningo lwezokwelapha oseluke lwenziwa oluveza ukuthi ukusebenzisa izengezo zezakhamzimba ekudleni kuyakwazi ukuvimbela noma ukwelapha iCovid-19,” kusho isitatimende saleli thimba.
Bathi amakhasimende mawabike ngaleyo mikhiqizo kwabe-United States Food and Drug Administration. Yona futhi le Food and Drug Administration isithumele izincwadi zokwexwayisa izinkampani eziningi ezithengisa imikhiqizo ewumbo-mbayi yeCovid-19. Kunjalo nje nayo ithi kakukho ndlela evunyiwe ngokomthetho.
UKUKHOLELWA EMANDLENI AWUMLINGO
Kuyindida ukuthi naphezu kokuba bevumelana ongoti, kwenziwa yini abantu baqhubeke nokuthenga le mikhiqizo. Kuleli phuzu uDkt Barrett uthi: “Abantu bayakholwa ngabakuzwile futhi kakukho mzamo ohleliwe ongasilungisa isimo.
“Kakukho nzuzo etholakalayo ngokuthi le nto kayisebenzi kodwa kunemali eningi ongayizuza ngokufafaza lawo mampunge, kanti kuba yilokho abantu abavamise ukukuzwa kuphindaphindwa abaku-kholwayo,” esho.
Ngokusho kukaDkt Philip Muskin onguSolwazi wezengqondo eColumbia University Medical Centre eNew York, e-USA, uthi: “Abantu banovalo futhi nxa une-twetwe, izinga lokwahlulela lengqondo lingase lithikamezeke.
“Kuphela osuke ukulangazele yikhambi, bese kuvela isithombe sowesifazane obukeka kahle noma owesilisa osendaweni enhle ekutshela ukuthi ikhambi elithile noma isengezo (supplement) sama-vitamin singakusiza. Ngisho wazi ukuthi kakukwazi ukuba yenzeke into enjalo, kepha wonke umuntu ufuna ukukholwa wumlingo,” kusho uDkt Muskin.
ABADALA YIBONA ABASENGCUPHENI
“Abadala abavamise ukuziphilela ngabodwana bangase baphathwe wumzwangedwa, nokubenza babe yizisulu zabantu abafuna ukusebenzisa lelo thuba,” kusho uDkt William Dale ongumqondisi we-Center for Cancer and Aging, eCity of Hope, eLos Angeles e-USA.
Uthi abantu abadala kulula ukuba bakholwe ngabakuzwayo futhi basebenzisa kakhulu ucingo kunabanye, okubashiya bengavikelekile emaqoleni ahweba ngocingo.
“Enye indlela yokuthola ukuthi kukhona ozama ukuqola umhlobo wakho osekhulile ngeminyaka yobudala, wukubuza ngesimo semishanguzo yabo. Buza ukuthi unayo ngokwanele noma uyadinga yini ukuxhumana nodokotela ukuze athole eminye, bese wengeza ngokuthi ulwazi oluyinkohliso lungase luphazamise usizo lokwelashwa alusebenzisayo, noma umeluleke ukuba abuze kudokotela wakhe ukuthi lolo lwazi luphephile na,” kusho uDkt Dale.
Kuyasiza futhi ukukhumbuza abathandiweyo bethu asebekhulile ukuthi nabantu abangakazikhombisi izimpawu zegciwane bangakuthelela ngesifo ngakho-ke ukuqhelelana phakathi komuntu nomuntu kusemqoka.
Umbuzo osezindebeni zawo wonke umuntu uthi: Pho, yikuphi okunosizo? Bonke ongoti bayakuncoma ukuhlamba izandla njalo ngoba insipho, noma ngeyaluphi uhlobo, iyaliphazamisa igciwane. Nxa kunendawo enompompi nosinki sebenzisa lokho, bese kuthi nxa ungaphandle usebenzise i-sanitiser. Ukuvocavoca umzimba, wukudla okunezakhamzimba, nokulala ngokwanele kuyasiza.
* ulwazi: health24.com
Previous articleSizophila neCovid-19 impilo yethu yonke
Next articleUmkhongi akamemezi ngamaduna uma esaqa